Ese mabhuku aMatilde Asensi | Zvazvino Zvinyorwa
Akazvarwa muAlicante muna Chikumi 12, 1962, Matilde Asensi ndomumwe wevanyori vakabudirira kwazvo veSpanish vechiuru chemakorene vaverengi vanopfuura mamirioni makumi maviri pasirese. Munyori wenyaya yezvakaitika uye zvekushambadzira zvine mukurumbira wakaitika mukutanga kwema2000, mutori wenhau uye munyori anoramba achikwezva vaverengi nenyaya dzake. Tinokuunzira mabhuku ese naMatilde Asensi kuitira kuti, kana usati watoziva, unogona kuwana uyu munyori mukuru.
1 Iyo Amber Kamuri (1999)
3 Iyo Yekupedzisira Cat (2001)
4 Akarasika Mavambo (2003)
6 Zvese zviri pasi pedenga (2006)
7 Martin Sirivha Ziso Trilogy
7.1 Firm pasi (2007)
7.2 Kutsiva muSeville (2010)
7.3 Zano reCortés (2012)
8 Kudzoka kwekati (2015)
Iyo Amber Kamuri (1999)
Chinyorwa chekutanga chaMatilde Asensi chakabva kuPaza y Janés imba yekushambadzira, kunyangwe hazvo yakaburitswazve nePlaneta muna2006. Zano rekupindwa muropa rinopa iyo inozivikanwa se Chess Boka, iyo nhengo dzayo dzinotsvaga pendi "Iyo Amber Kamuri", imwe yema canvases akarasika panguva yekupamba kwehunyanzvi kwakaitwa nemauto eNazi muna 1941 munyika dzeSoviet. Kunyangwe achikurudzira kuenderera mune epilogue yake, Asensi haasati anyora chikamu chechipiri.
Ungada here kuverenga Iyo amber kamuri?
Kubva pazuva ranhasi uye Hondo Yenyika Yekutanga, Matilde Asensi akatinyudza kupera kwema crusade, kunyanya mukuparadzwa kweiyo Order yeThe Templars pakutanga kwezana regumi nemana century. Iyo rangano inotanga nekudzoka kuIberian Peninsula ye Galcerán de Akazvarwa, mumongi weOrder of the Hospital, muvengi weTemplars. Mushure mekusiya achitsvaga mamwe mabhuku kuti adudzire uye murume wechidiki ane chishongo chisina kujairika, protagonist anoyambirwa naPapa Clement, uyo anomupa basa rekutsvaga mhondi yeakamutangira, Pope Clement V naMambo Philip IV weFrance. , uyo akafa mushure mekuurayiwa kwaTenzi Mukuru weVatempeli.
Kufamba uchidzoka munguva neIacobus naMatilde Asensi.
Iyo Yekupedzisira Cat (2001)
Zvipikiri pamusoro kutengesa kwemamiriyoni 1.25 emakopi, yeimwe mabhuku akabudirira kwazvo naMatilde Asensi ichiri kuenderera kuve chiratidzo chevadi vemazuvano enhoroondo. Iye protagonist wenyaya ino ndiOttavia Salina, munun'una anowana mavara manomwe echiGiriki nemichinjikwa minomwe yakamonyorwa pachitunha chemukadzi wechidiki wekuEthiopiya. Parutivi pake, anowana zvidimbu zvehuni izvo pakutanga zvishoma zvinoita kuti afungidzire kuti zvine chekuita neVera Cruz, idzo zvidimbu zvadzo zviri kubiwa kutenderera pasirese. Pamabhuku ese aMatilde Asensi, iyi ndeimwe yezvatinoda.
Iwe hausati waverenga Mboro yekupedzisira?
Akarasika Mavambo (2003)
Kunyanya kusanzwisisika mune hunhu uye kumisikidzwa mumazuva edu, Yakarasika mavambo, inobatanidza zvakapfuura nezvazvino kuburikidza ne Ruzivo rwekushanya chete. Iye protagonist weruzivo ndiArnau, mubiridzi kubva kuBarcelona ane mukoma anotambura neCotard's syndrome (kana denial syndrome). Mushure mekuongorora kutsvagurudzwa kwemukoma wake nezvekwakabva kapoka keYatiris uye mutauro wechiAymara (wakare kwazvo kuti ungateedzere mutauro wemakomputa), Arnao anoronga kuenda kuBolivia kunowana kwakatukwa iko kungadai kwakakonzera kurwara kwehama yake.
Kubudikidza nemeso evapanduki Jonás, mwanakomana wemurwi Galcerán de Born, tinoziva a Mugwagwa waSantiago izere netsika idzo wechidiki protagonist anotarisira kuzadzisa pamwe neakare Templar mushure mekuita vimbiso kune vanotangisa vatasvi vemabhiza. Pamabhuku ese naMatilde Asensi, Peregrination Iyo, inopfuura ingano senge yakadaro, chikonzero chakakwana chekutarisa mataundi netsika yenzvimbo dzakadai senge iyo nzira yeJacobean mukati mezana ramakore regumi nemana.
Zvese zviri pasi pedenga (2006)
Asensi anoita kuti tifambe kuenda kuChina izere nezvakavanzika uye hupfumi hwakavanzika hunoratidzwa pamepu ye Zvese pasi pedenga. Iyo nyaya inotanga nekuwanikwa kwe protagonist, Ana, mudzidzisi wechiSpanish muParis, nezvekufa kwemurume wake muShanghai. Mushure mekusvika munyika yeAsia, mukadzi wechidiki anozoona kuti mushure mekufa kwake kutsvaga kwepfuma yaMambo wekutanga kunogona kuvanzwa, ane guva rake riri muguta reXián. Chiitiko chakanangana newachi iyo inowedzerwa kutambudzwa nemafia anozvidaidza kuti Green Band uye nemachinda eumambo.
Martin Sirivha Ziso Trilogy
Firm pasi (2007)
Muhupenyu hwake hwese, Matilde Asensi akange ataura zvakavanzika zvesango reAmazon, China kana medieval Europe, asi aive aine chimiro chakamirira: kuenda kuAmerica muzana ramakore regumi nemanomwe. Inozivikanwa saMartín Ojo de Plata trilogy, kana mukuru weSpanish Golden Age Saga, Tierra Firme yakava vhoriyamu yekutanga yechinetso chitsva chemunyori. Iko kune nyaya yemukadzi, Catalina Solís, uyo anofanirwa kutora hunhu hwemukoma wake Martín, akaurayiwa nevamwe vapambi veChirungu panguva yekufamba kuenda kuNew World. Mushure mekupedza makore maviri pachitsuwa chegwenga, Catalina anova Martín Ojo de Plata, mumwe wevanonyanya kutsiva muCaribbean.
Ungada here kuverenga Mainland?
Kutsiva muSeville (2010)
Mushure mekuuya kweTierra firme, Catalina Solís akadzokera kuSpain muna 1607, kunyanya kuguta reSeville, kwaakaronga kuuraya Curvo, mhuri yakakosha yevatengesi kubva kuNew World. Iri bhuku rinoshanda seuchapupu hukuru hwenguva inosiririsa uye yakajeka sezvaive iyo Spanish Golden Age.
Tsvaga Kutsiva muSeville.
Zano reCortés (2012)
Kuparadza iyo Curvo kunova Catalina Solís 'chinangwa chekuburitsa mhuri yemutengesi, ino nguva kubva kuNyika Itsva. Chikamu chakakosha chenyaya yacho chinowira pamepu yeHernán Cortés, iyo iyo maCurvos anotsvaga kupidigura mambo weSpain. Epic yekupedzisa kubata kwerwendo rwakasimba urwo Asensi anotikumbira netrigogy yake chete kusvika zvino.
Pedzisa Isabel Allende's Spanish Golden Age saga na Kurangana kwaCortés.
Kudzoka kwekati (2015)
Iyo yakabudirira Iyo yekupedzisira Caton yaifanirwa chikamu chechipiri chakatora makore gumi nemana kuti chisvike, zvakare ichive kubudirira kukuru. Zvakare, Ottavia Salina, achiperekedzwa naFarag Boswell, munyori wenhoroondo weGreco-Roman Museum yeAlexandria uyo watakatosangana naye mubhuku rekutanga, anotanga kugadzirisa zvakavanzika zvakatanga muzana ramakore rekutanga, nguva imwecheteyo. Nzira yeSirik.
Iwe hauna Kudzoka kwekatoni?
Iwe unofungei nezve izvi 8 makuru nhoroondo enhoroondo mazita?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Ese mabhuku eMatilde Asensi
"Iyo Nhare Yakasviba." Zvinotyisa, sainzi ngano uye fungidziro yerima kumadokero naStephen King